सीमा नाघेर सेक्स सिन दिन्नँ – नायिका सिमा के. सी. - Glamour Nepal
सीमा नाघेर सेक्स सिन दिन्नँ – नायिका सिमा के. सी.
सीमा के.सी. नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा उदाउँदै गरेकी नायिकाको नाम हो । सिनेमाको रंगीन दुनियाँमा आफ्नो नाम चम्काउने सपना बोकेर गुल्मीबाट राजधानी छिरेकी सीमा अहिले आफ्नो त्यही सपना पूरा गर्न कम्मर कसेर लागेकी छन् । बाबु बलामीले निर्देशन गरेको चलचित्र ‘जंगल लभ’ बाट नेपाली रजटपटमा डेब्यु गरेकी हुन्। ‘युज’की उनी नायिका मात्र होइन्, ‘कन्सेप्ट डाइरेक्टर’ पनि हुन् । यसरी उनी नायिकासँगै राम्रो मेकरका रूपमा स्थापित गराउन अहिलेदेखि नै लागिपरेकी छिन् । ‘सादा जीवन उच्च विचार’लाई आफ्नो जीवनको मूलमन्त्र मान्ने सीमासँग गरिएको कुराकानी:
सिनेमाको रंगीन दुनियाँमा आफूलाई स्थापित गराउन धेरै नवनायिकाहरू संघर्ष गरिरहेका छन् । यो भीडमा दर्शकको रोजाइमा पर्ने खालका विशेष गुणहरू तपाईंमा के–के छन् नि ?
पहिलो कुरा त ममा अरूभन्दा केही भिन्न गर्न सक्छु भन्ने इच्छाशक्ति र आत्मविश्वास छ । रातारात हिट हुनेभन्दा लामो समयसम्म टिकिरहने प्रयासमा पनि छु । अलि ‘डिजर्भ’ टाइपकी छु । त्यसैले पनि दर्शकको रोजाइमा पर्छु भन्ने विश्वास छ ।
एउटी निपुण एक्ट्रेसमा अनिवार्य हुनुपर्ने गुणहरू के–के हुन् ?
एक्ट्रेस भएपछि सबै भूमिका र पात्रलाई पर्दामा जीवन्त उतार्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । डान्स पनि राम्रो हुनुपर्छ । आफूले नजानेका कुराहरू सिक्ने इच्छाशक्ति र जाँगर हुनुपर्छ । यसका अलवा ‘आई क्यान डु एनिथिङ’ भन्ने खालको आत्मविश्वास हुनु पनि अनिवार्य छ जस्तो लाग्छ ।
तपाईंमा चाहिँ यी गुणहरू कत्तिको छन् ?
(हाँस्दै) कति छन् । कतिचाहिँ सिक्ने क्रममा छु । मुख्य कुरा नजानेको कुरा सिक्न मलाई कति पनि हिच्किचाहट लाग्दैन ।
अहिलेका चल्तीका हिरोइनमध्ये आफ्नो प्रतिस्पर्धी क–कसलाई मान्नुहुन्छ ?
सबै राम्रो नै हुनुहुन्छ । यस हिसाबले उहाँहरू सबै मेरो प्रतिस्पर्धी हो । त्यसमध्ये मलाई निशा अधिकारीको काम निकै मन पर्छ ।
नायकमा चाहिँ को मनपर्छ नि ?
सुमन सिंह । उहाँ अरू नायकभन्दा ‘एक्स्ट्रा’ भएकोले फिल्म लाइनमा आउनु भन्दा पहिले देखि नै उहाँको म बिग फ्यान हुँ । उहाँसँग काम गर्ने ठूलो इच्छा छ ।
परिवारको सपोर्ट कस्तो छ ?
खासमा एक्टे«स बन्ने सपना मेरोभन्दा पनि परिवारको हो । म सानै हुँदादेखि नै ममीले ‘छोरी तिमी कलाकार बन्नुपर्छ । टिभीमा देखिनुपर्छ’ भन्नुहुन्थ्यो । मेरी छोरी सबैको लागि उदाहरणीय हुनुपर्छ भन्ने उहाँको इच्छा थियो । ममीको त्यही सपना पूरा गर्न नै आज म संघर्ष गरिरहेकी छु । त्यसैले परिवारको सपोर्ट नहुने भन्ने कुरा नै छैन ।
हिरोइन बनेपछि साथीहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
बाहिर हिँड्दा छोटो कपडा लगाउने, मेकअप गर्ने बानी छैन । नर्मल लुक्समै हुन्छु । त्यसैले धेरैलाई म हिरोइन हुँ भन्ने पत्तो छैन । जतिलाई थाहा छ, उनीहरूचाहिँ मप्रति ‘प्राउड’ फिल गर्छन् । अझ अगाडि बढ्न ‘इनकरेज’ गर्छन् ।
तपाईंले निर्देशक बाबु बलामीसँग ‘जंगल लभ’, ‘थ्यांक यु’ र ‘युज’ गरी तीन चलचित्रमा काम गरिसक्नुभएको छ । उहाँको नजरमा पर्नुको खास कारण ?
उहाँको नजरमा मभन्दा पनि मेरो नजरमा उहाँ पर्नुभएको हो । म एक समयमा यो क्षेत्रमा नलाग्ने निर्णयमा पुगिसकेकी थिएँ तर उहाँले नै ‘तिमीले केही गर्नुपर्छ, आफ्नो क्षमता मर्न दिनुहँुदैन’ भनेर मलाई यो ठाउँसम्म ल्याउनुभयो । फेरि उहाँसँग पारिवारिक सम्बन्ध भएकोले पनि उहाँको प्रोजेक्ट हमेसा छोड्दिन । उहाँले नराखे पनि झगडा गरेर भए पनि गर्छु । फिल्म लाइनको मेरो अभिभावक भनेकै बाबुजी नै हो । (उनले हाँस्दै यसो भनिरहँदा नजिकै रहेका निर्देशक बलामी पनि मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए) ।
तर बाबुजीले तपाईंलाई नायिकाको रूपमा लिनुभएको चलचित्र ‘जंगल लभ’ असफल भयो । धेरै दर्शकले तपाईंलाई ‘नोटिस’ गरेनन् । यसले त उहाँको साथले तपाईंको करियरलाई उकास्ने संकेत देखिँदैन नि ?
त्यस्तो अलि नहोला । यो चलचित्रले उपत्यकाबाहिर राम्रो व्यापार ग¥यो तर उपत्यकामा भने खासै चलेन । एकैपटक चार–पाँचवटा सिनेमा रिलिज हुने भएकोले पनि दर्शकलाई कुन हेर्ने द्विविधा हुन्छ । यसले पनि दर्शकको नजरमा पर्न मुस्किल छ तर एउट चलचित्र असफल भयो भन्दैमा ऊसँगका हरेक काम असफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
नयाँ नायिकाहरू आर्थिक मात्र होइन् शारीरिक शोषणको पनि सिकार हुन्छन् भनिन्छ । तपाईंले चाहिँ यस्ता शोषणहरू कत्तिको सहनुपरेको छ ?
म अधिकांश समयमा बाबुजीकै साथमा हुने भएकोले अरूले त्यस्तो गर्ने आँटै गर्न सक्दैनन् ।
अहिले इन्डस्ट्रीमा बोल्ड नायिकाहरूको बोलवाला छ । जसले धेरै अंग प्रदर्शन गर्यो, उही सफल भइरहेका छन् । तपाईंचाहिँ अंग प्रदर्शनमा कत्तिको उदार हुनुहुन्छ ?
यो बिल्कुलै गलत ‘ट्रेन्ड’ हो । कलाकारले अंग होइन, अभिनय देखाउनुपर्छ । त्यसैले म अंग प्रदर्शन गरेर आफूलाई स्थापित गराउने भीडभन्दा टाढा छु । फेरि मलाई साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरेर हिरोइन बन्नु पनि छैन । त्यसैले कुनै पनि हालतमा सीमा नाघेर सेक्स सिन दिन्नँ ।
अहिलेसम्मको यात्राले भोलिको बाटो कत्तिको सहज देख्नुभएको छ ?
हिरोइनको रूपमा मात्र नभई मेकरको रूपमा पनि आफूलाई स्थापित गराउन संघर्ष गरिरहेको हुनाले मेरो भविष्य निकै सुन्दर छ जस्तो लाग्छ । बाटो सहज नभए पनि गन्तव्य निकै सुनौलो देखेकी छु ।